अर्थ – Page2– Hamropati.com
Home»अर्थ (Page 2)
By on February 4, 2018 अर्थ
इलाम, माघ । नेपालमा चिया खेती शुरु भएको झण्डै १५४ वर्षपछि नेपाली अर्थोडक्स चियाले आफ्नै पहिचान पाएको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्ड, चिया उत्पादनसँग सम्बन्धित संघसंस्था र चियाविज्ञको लामो प्रयासपछि नेपाली अर्थोडक्स चियाले आफ्नो लोगो ९ट्रेडमार्क० पाएको हो । हिमालको आकृतिसँगै ‘नेपाली टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालय’ लेखिएको लोगो नेपाली चियाले पाएको छ […]
स्वरोजगार लघुवित्तद्वारा आफ्ना सदस्यहरुलाई अबलोकन भ्रमण
By on February 1, 2018 अर्थ, प्रमुख समाचार, समाज
मिना पौडेल(दुवाडी ) स्वरोजगार लघुवित्त बिकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय हेटौडाले आफ्ना सदस्यहरुलाई अबलोकन भ्रमण गरायको छ।यहि माग १६ गते चितवन को जगतपुरमा रहेको जगतपुर एग्रो प्रालिको अबलोकन गरायको उक्त शाखाका शाखा प्रबन्धक सुसिल पौडेल ले बताउनु भयो ।११७ जना महिला सदस्यहरुले उक्त अबलोकन भ्रमणमा गर्दै उक्त जगतपुर एग्रो प्रालिको अबलोकन गरका थियो ।केन्द्रीय कार्यालय बाट […]
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन नेपालले चासो दिएन
By on January 29, 2018 अर्थ, प्रमुख समाचार
काठमाडौं – केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउन चीन सकारात्मक भइरहेका बेला नेपाल सरकारले भने चासो दिएको छैन । उक्त योजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारसँग रहेको संकेत गर्दै चिनियाँ टोली फर्किएको लामो समय हुँदा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै काम अगाडि नबढाइएको हो ।कात्तिक २४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–चीन संयुक्त स्थलगत अध्ययनपछि चिनियाँ अधिकारी र नेपाली अधिकारीबीच […]
By on January 24, 2018 अर्थ
१० माघ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यसबाट निगमले कर्मचारीलाई वितरण गर्न थप करिब ५६ करोड रुपैयाँ बोनसका छुट्याएको छ । अब निगममा बाँड्न बाँकी बोनस रकम झण्डै ३ अर्ब रूपैयाँ पुगेकाे छ । तर, आयल निगम तत्कालै […]
यि हुन नेपालमा पाइने बाईक (मुल्य सहित)
By on January 23, 2018 अर्थ
मोटरसाइकल अर्थात बाईक अहिले सर्वसाधारणका लागि अति आवश्यक बस्तु भैसकेको छ । कुनै समय विलासिताको साधनको रुपमा गनिने बाइक अहिले दैनिक जीवनलाई तान्ने रथ बनेको छ । नेपाली बजारमा विभिन्न कम्पनीका विभिन्न मोटरसाइकलहरु उपलब्ध छन् र तिनीहरुको मूल्य पनि बाइक र कम्पनी पिच्छे फरक छन् । आज हामीले तपाईहरुको लागी हरेक बाइकको मूल्यहरू प्रस्तुत गर्दै […]
एक प्रतिशत धनाढ्यसँग संसारको ८२ प्रतिशत सम्पत्ति !
काठमाडौं, माघ ९ सन् २०१७ मा विश्वव्यापी रूपमा सिर्जना भएको कुल सम्पत्तिमा विश्वको आधा जनसंख्याको कुनै हिस्सेदारी छैन । संसारभरको कुल सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत धनाढयको स्वामित्वमा छ । बेलायतमा मुख्यालय रहेको ‘अक्सफाम इन्टरनेसनल’ ले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त खुलासा गरेको हो । अक्सफामले दाबोसमा मंगलबार सुरु हुने विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लूईएफ) को शिखर […]
सिमेन्ट र छडको भाउ बढेको बढ्यै
By on January 22, 2018 अर्थ
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले १५ दिनकै अवधिमा पाँच पटकसम्म मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ । मूल्यवृद्धिसँगै नयाँ घर बनाउने तयारीमा रहेकाहरु मारमा परेका छन् । घर निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य हटात बढेपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यसबारे अनुगमन गरेको छ ।विभागले तयार गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले व्यवसायीले अनियमित ढंगले […]
चीनले दियो नेपालको लागि अर्को ठुलो मौका
नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बन्दरगाह प्रयोगका लागि चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल–चीनबीच भएको पारवहन सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ६ वटा बन्दरगाह प्रयोगका लागि प्रोटोकल प्रस्ताव गरेको वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । चीनले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि नेपालले चीनको बन्दरगाहमार्फत् तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न बाटो खुल्नेछ । यसले भारतसँगको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुनेछ […]
अब जुनसुकै बैंकबाट पनि पैसा राख्न मिल्ने
By on January 21, 2018 अर्थ
काठमाडौं । आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न खाता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानु पर्दा हैरानी महसुस गरिरहनु भएको छ ? छ भने तपाइको लागि खुशीको खबर छ । अब तपाइको खातामा पैसा जम्मा पार्न खाता भएकै बैंकसम्म धाइरहनु पर्दैन । अबदेखि तपाइले आफूलाई पायक पर्ने वा नजिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा गएर आफ्नो […]
एनसेल,युटिएल र नेपाल स्याटेलाइटकाे शेयर निस्कासन गर्ने तयारी
By on January 20, 2018 अर्थ
काठमाडौं। नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी भएका टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलार्इ शेयर निष्काशनका लागि निर्देशन दिएको छ। नयाँ कम्पनी ऐन अनुसार पाँच करोड भन्दा बढी पूँजी भएका टेलिकम कम्पनीले २०७६ वैशाखभित्र शेयर निष्काशन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए अनुसार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो।पाँच करोड भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका […]